Mpanamboatra sy mpamatsy famolavolana appliance China Home Mestech
Ny famolavolana kojakoja ao an-trano dia ny hampivelatra ny endrika ivelany sy ny atin'ny fitaovana ao an-trano. Anisan'izany ny famolavolana ny faritra plastika sy ny vy.
Amin'izao fotoana izao, ny takian'ny olona amin'ny fitaovana ao an-trano dia tsy vitan'ny hoe miasa fotsiny, fa koa takiana amin'ny hatsarana izay endrika tsy manam-paharoa, manokana ary kanto.
Ny famolavolana ny kojakoja elektrika ao an-tokantrano dia mifototra amin'ny akora plastika sy vy, atambatra amin'ny foto-kevitry ny hatsaran-tarehin'ny olona sy ny firafitry ny vokatra, amin'ny alàlan'ny rindrambaiko famolavolana 3D hamolavolana ny endrika sy ny firafitry ny vokatra, ary farany sary ho an'ny famokarana lasitra sy ampahany.
Mestech dia manome ny mpanjifa ireto famolavolana sy famokarana vokatra elektronika manaraka ireto:
(1) Fitaovana manokana ao an-trano: anisan'izany ny fanamainam-bolo, fanaratra herinaratra, lohany vy elektrika, borosy nify elektrika, fitaovana fanaovana hatsarana elektronika, mpanotra elektronika sns.
(2) Fampiasana manokana ny vokatra nomerika: solosaina takelaka, rakibolana elektronika, milina fianarana palma, milina lalao, fakan-tsary niomerika, vokatra fanabeazana ho an'ny ankizy, sns.
(3) Fitaovana ao an-trano: anisan'izany ny fanamafisam-peo, heater elektrika, fanamainana, fanadiovan-drivotra, mpizara rano, lakolosim-baravarana, sns.
Famolavolana vokatra elektronika ao an-trano
Console lalao Palm
Masinina fianarana ny feo ho an'ny ankizy
Tetikasa nomerika ho an'ny fianakaviana
Fanadio vavahady robotic
Famolavolana endrika an'ny fitaovana elektronika ao an-trano
1.Ny famolavolana ny fitaovana elektronika ao an-trano dia ny endrika endrika endrika, ny endrika ankapobeny drafitra ary ny famolavolana ny faritra manokana. Tsy toy ny fitaovana indostrialy,
(1) Hamafiso ny famolavolana endrika ivelany, ny toetra ary ny mampiavaka azy.
(2) .antitrantero ny zavatra niainan'ireo mpampiasa. Toy ny fandidiana ahazoana aina, mora entina, tsy tantera-drano.
(3). Mifantoha amin'ny habe, ny habe ary ny lanjan'ny vatan'ny vokatra.
(4). Haingo matetika ny fisehoan'ny vokatra amin'ny alàlan'ny firafitry ny firafitra, ny elektrôlika, ny hosodoko, ny lamba landy ary ny fizotran'ny fitsaboana hafa.
2.Noho ny fifandraisana isan'andro amin'ny vatan'olombelona, ​​ny fitaovana elektronika ao an-trano dia manana fepetra takiana amin'ny fiarovana
(1). ny fitaovana ampiasaina dia tsy manimba ny vatan'olombelona Misy karazana fenitra telo an'ny RoHS, ahatratra ary 3C any Shina. Zava-dratsy ateraky ny fenitra ho an'ny ampahany amin'ny vokatra
(2) Ny taratra elektromagnetika dia tsy tokony ho avo noho ny fenitra fiarovana eken'ny vatan'olombelona fa mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny olona ny taratra elektromagnetika. Ireo vokatra elektronika, indrindra ireo vokatra fifandraisana izay miankina amin'ny signal tsy misy tariby, dia hamoaka taratra elektromagnetika. Amin'ny famolavolana ny vokatra toy izany dia ilaina ny mampihena ny lanjan'ny taratra elektromagnetika amin'ny faritra azo antoka.
(3) Fanamafisana herinaratra: ho an'ny kojakoja ao an-tokantrano misy herinaratra miasa (AC) avo lenta, anti-leakage, insulation na famolavolana tantera-drano tsy maintsy atao amin'ny famolavolana vokatra hisorohana ny lozam-pifamoivoizana.
Mestech dia manome ny mpanjifa famolavolana OEM, famokarana bobongolo, famokarana ampahany ary fanangonana ireo vokatra elektronika mahazatra ao an-trano. Manantena izahay fa mila mifandray aminay ny mpanjifa mila fanampiana, hanome anao ny serivisinay tsara indrindra izahay.
Previous: Famolavolana trano elektronika
Manaraka: Famolavolana vokatra plastika
Famolavolana sy famolavolana plastika fitsaboana
Volo plastika amin'ny tariby sy tariby